ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချက် ချီချေဝါ ဂါ ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပါရှန်း ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မီဇိုး မူအာရေး မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အာမေးနီးယား (အနောက်) အီတလီ အူရ်ဒူ အော့စက်တီယန် အေးဝေး
“ဒံယေလကျမ်းသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကျမ်းများတွင် တစ်ကျမ်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်” ဟု ဟိုလ်မဲန်သရုပ်ပြသမ္မာကျမ်းစာအဘိဓာန် (Holman Illustrated Bible Dictionary) က ဖော်ပြထားသည်။ “ဒံယေလကျမ်းသည် ထာဝရအမှန်တရားများနှင့် ပြည့်နေသည်။” ဒံယေလမှတ်တမ်းသည် ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင် နေဗုခဒ်နေဇာ ယေရုရှလင်သို့လာပြီး မြို့တော်ကို ဝန်းရံပိတ်ဆို့ကာ ‘ဣသရေလမင်းမျိုးမင်းသားထဲက တချို့’ ကို သုံ့ပန်းအဖြစ် ဗာဗုလုန်သို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ဘီစီ ၆၁၈ တွင် စတင်သည်။ (ဒံယေလ ၁:၁-၄) ထိုသူတို့ထဲတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာသာဖြစ်နိုင်သည့် လူငယ်ဒံယေလပါဝင်သည်။ ဗာဗုလုန်တွင်ရှိနေချိန်၌ပင် ဤစာအုပ်ကို ဒံယေလအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ ယခု အသက် ၁၀၀ နီးပါးရှိပြီဖြစ်သောဒံယေလသည် ဘုရားသခင်၏ဤကတိတော်ကို ရရှိထားသည်– “ငြိမ်ဝပ်စွာနေရလိမ့်မည်။ နေ့ရက်ကာလကုန်စင်ပြီးမှ ကိုယ်အရိပ်အရာကိုခံ၍ ပေါ်ရလိမ့်မည်။”—ဒံယေလ ၁၂:၁၃။
ဒံယေလကျမ်း၏ပထမပိုင်းကို အပြင်လူတစ်ဦး၏ရှုထောင့်မှ သက္ကရာဇ်စဉ်အလိုက် တင်ဆက်ထားပြီး ဒုတိယပိုင်းကို ဒံယေလ၏ရှုထောင့်မှ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒံယေလရေးသားခဲ့သောဤကျမ်းတွင် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်များ၏ အတက်အကျ၊ မေရှိယပေါ်ထွန်းမည့်အချိန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့် အဖြစ်အပျက်များတို့နှင့်ပတ်သက်သော ပရောဖက်ပြုချက်များ ပါဝင်သည်။ * သက်ကြီးရွယ်အိုပရောဖက်သည် သူ၏ရှည်သောအသက်တာကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ သမာဓိစောင့်ထိန်းသောအမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို အားပေးမှုဖြစ်စေသည့်အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်ပြောပြသည်။ ဒံယေလ၏သတင်းစကားသည် အသက်ရှင်ပြီး တန်ခိုးနှင့်ပြုပြင်တတ်၏။—ဟေဗြဲ ၄:၁၂။
အချိန်ကား ဘီစီ ၆၁၇ ခုဖြစ်သည်။ ဒံယေလနှင့် မိတ်ဆွေလူငယ်သုံးယောက်ဖြစ်သော ရှာဒရက်၊ မေရှက်နှင့် အဗေဒနေဂေါတို့သည် ဗာဗုလုန်နန်းတွင်းတွင် ရှိနေကြသည်။ သူတို့၏သုံးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်မှုခံယူရသည့် နန်းတွင်းဘဝအတောအတွင်း ဤလူငယ်များသည် ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏သမာဓိကို စောင့်ထိန်းထားကြသည်။ ရှစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအိပ်မက်တစ်ခု မြင်မက်ခဲ့၏။ ဒံယေလသည် အိပ်မက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးနောက် အဓိပ္ပာယ်ကိုပါ ရှင်းပြသည်။ ယေဟောဝါသည် ‘ဘုရားသခင်တို့၏ဘုရားသခင်၊ ဘုရင်တို့၏အရှင်၊ နက်နဲသောအရာကိုဖွင့်ပြတော်မူသော သခင်ဖြစ်တော်မူ’ သည်ကို ရှင်ဘုရင်အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရသည်။ (ဒံယေလ ၂:၄၇) သို့သော် မကြာမီတွင် နေဗုခဒ်နေဇာသည် ဤသင်ခန်းစာကို ပြန်မေ့လျော့သွားပုံရ၏။ ဧရာမရုပ်တုကြီးကို ကိုးကွယ်ပျပ်ဝပ်ရန် ဒံယေလ၏အဖော်သုံးဦး ငြင်းဆန်သောအခါ ရှင်ဘုရင်သည် သူတို့အား မီးဖိုထဲသို့ပစ်ချစေခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်သည် ထိုလူသုံးယောက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ‘ထိုမျှလောက်သောကယ်တင်ခြင်းကို ထိုဘုရားသခင်မှတစ်ပါး အဘယ်ဘုရားသခင်မျှ မပြုနိုင်’ သည်ကို နေဗုခဒ်နေဇာ မဖြစ်မနေအသိအမှတ်ပြုခဲ့ရသည်။—ဒံယေလ ၃:၂၉။
နေဗုခဒ်နေဇာသည် နောက်ထပ်ထူးခြားသည့်အိပ်မက်တစ်ခု မြင်မက်ခဲ့သည်။ ဧရာမသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို သူမြင်မက်ခဲ့ပြီး ယင်းသစ်ပင်သည် ခုတ်လှဲခံရကာ မကြီးထွားရန် ချည်နှောင်ခြင်းခံရသည်။ ဒံယေလသည် ထိုအိပ်မက်၏အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းပြ၏။ အိပ်မက်သည် နေဗုခဒ်နေဇာ စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး ပြန်ကောင်းမွန်လာချိန်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်များကြာပြီးသော် ဘုရင်ဗေလရှာဇာသည် သူ၏မှူးမတ်များအတွက် စားသောက်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပပြီး ယေဟောဝါ၏ဗိမာန်တော်မှ သိမ်းယူထားသော ဖလားများကို မရိုမသေသုံးစွဲလေသည်။ ထိုညတွင်ပင် ဗေလရှာဇာအသတ်ခံရပြီး မေဒိအမျိုးဒါရိမင်းက နိုင်ငံကို ရယူလိုက်သည်။ (ဒံယေလ ၅:၃၀၊ ၃၁) ဒါရိမင်းနန်းစံချိန်တွင် အသက် ၉၀ ကျော်ပြီဖြစ်သော သက်ကြီးရွယ်အိုပရောဖက်ဒံယေလသည် မနာလိုသောအရာရှိများ၏ သတ်ဖြတ်လိုသောအစီအစဉ်တွင် ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ယေဟောဝါသည် သူ့အား ‘ခြင်္သေ့လက်မှ ကယ်လွှတ်တော်မူသည်။’—ဒံယေလ ၆:၂၇။
၁:၁၁-၁၅—ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားခြင်းသည် ယုဒလူငယ်လေးယောက်၏ မျက်နှာအဆင်းလှခြင်းအတွက် အကြောင်းရင်းဖြစ်သလော။ မဟုတ်ပါ။ ဆယ်ရက်မျှနှင့် မည်သည့်အစားအစာကမျှ ထိုသို့သောပြောင်းလဲမှုများကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ဟေဗြဲလူငယ်များ၏မျက်နှာအဆင်းလှခြင်းအတွက် ချီးမွမ်းဂုဏ်တင်ထိုက်သူမှာ သူတို့ယုံကြည်ကိုးစားသော၊ သူတို့ကို ကောင်းချီးပေးတော်မူသော ယေဟောဝါပင်ဖြစ်သည်။—သု. ၁၀:၂၂။
၂:၁—နေဗုခဒ်နေဇာသည် ဧရာမရုပ်တုကြီးနှင့်ပတ်သက်သောအိပ်မက်ကို အဘယ်အချိန်တွင် မြင်မက်ခဲ့သနည်း။ ယင်းအိပ်မက်ကို ‘နေဗုခဒ်နေဇာမင်း နန်းစံနှစ်နှစ်တွင်’ မြင်မက်သည်ဟူ၍ မှတ်တမ်းက ဖော်ပြထားသည်။ သူသည် ဘီစီ ၆၂၄ တွင် ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏နန်းစံနှစ်နှစ်သည် ဘီစီ ၆၂၃ တွင် စတင်ခဲ့မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ယုဒပြည်ကို သူကျူးကျော်မတိုက်ခိုက်မီနှစ်အတော်ကြာကြာကဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ဒံယေလသည် အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြရန် ဗာဗုလုန်မြို့တွင် ရှိခဲ့မည်မဟုတ်။ “နန်းစံနှစ်နှစ်” သည် ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်က ယေရုရှလင်မြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အုပ်စိုးရှင်ဖြစ်လာသည့် ဘီစီ ၆၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ရေတွက်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားသည်။
၂:၃၂၊ ၃၉—ငွေနိုင်ငံသည် ရွှေဦးခေါင်းထက် အဘယ်နည်းဖြင့် နိမ့်ကျသနည်း၊ ကြေးဝါနိုင်ငံသည် ငွေနိုင်ငံထက် မည်သို့နိမ့်ကျသနည်း။ ရုပ်တု၏ငွေအပိုင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော မေဒိ-ပေရသိအင်ပါယာသည် ယုဒပြည်ကို ဖျက်ဆီးခွင့်မရခဲ့သည့်အတွက် ရွှေဦးခေါင်းဖြစ်သော ဗာဗုလုန်ထက် နိမ့်ကျသည်။ နောက်လိုက်လာသောအင်ပါယာမှာ ကြေးဝါဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော ဂရိဖြစ်သည်။ ကြေးဝါသည် ငွေထက်နိမ့်ကျသည့်နည်းတူ ဂရိသည်လည်း မေဒိ-ပေရသိထက်နိမ့်ကျ၏။ ဂရိအင်ပါယာသည် ကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေဒေသကို လွှမ်းမိုးခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်ကို သုံ့ပန်းဘဝမှ လွတ်စေခြင်းတည်းဟူသော မေဒိ-ပေရသိလုပ်ခဲ့သည့်အခွင့်ထူးမျိုးကို ၎င်းအင်ပါယာပြုလုပ်ခွင့်မရခဲ့ပါ။
၄:၈၊ ၉—ဒံယေလကိုယ်တိုင် မှော်ဆရာဖြစ်ခဲ့သလော။ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ “မာဂုဆရာချုပ် [“မှော်ဆရာချုပ်၊” သမ္မာ]” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် ဒံယေလ၏ရာထူးဖြစ်သော “ဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကိုအုပ်စိုးသော ဝန်အရာ” ကို ရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်သည်။—ဒံယေလ ၂:၄၈။
၄:၁၀၊ ၁၁၊ ၂၀-၂၂—နေဗုခဒ်နေဇာအိပ်မက်မှ ဧရာမသစ်ပင်ကြီးသည် အဘယ်အရာကို ကိုယ်စားပြု သို့မဟုတ် အမှတ်သင်္ကေတပြုသနည်း။ သစ်ပင်သည် ကမ္ဘာ့အင်ပါယာ၏အုပ်စိုးရှင်တစ်ဦးအဖြစ် နေဗုခဒ်နေဇာအား ဦးဆုံး ကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော် အာဏာစက်သည် “မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်” ရောက်သောကြောင့် သစ်ပင်ကြီးသည် နေဗုခဒ်နေဇာအင်ပါယာထက် သာလွန်ကြီးမြတ်သောအရာကို ကိုယ်စားပြုရမည်။ ဒံယေလ ၄:၁၇ က အိပ်မက်ကို လူသားတို့အပေါ် အုပ်စိုးသော ‘အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်’ ၏အာဏာစက်နှင့် ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် သစ်ပင်သည် အထူးသဖြင့် မြေကြီးနှင့်ပတ်သက်သော ယေဟောဝါ၏စကြဝဠာအကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးမှုကိုလည်း ကိုယ်စားပြု၏။ ထို့ကြောင့် အိပ်မက်သည် နေဗုခဒ်နေဇာ၏အာဏာစက်နှင့် ယေဟောဝါ၏အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် ပြည့်စုံမှုရှိခဲ့သည်။
၄:၁၆၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ကဘ—“ခုနစ်ကာလ” သည် မည်မျှကြာမြင့်သနည်း။ ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာ၏အသွင်အပြင်တွင် တွေ့ရသောပြောင်းလဲမှုအားလုံးက “ခုနစ်ကာလ” သည် ပကတိခုနစ်ရက်ထက် ပို၍ကြာညောင်းဖို့ လိုအပ်ခဲ့သည်။ သူ့အဖြစ်တွင် ယင်းအချိန်ကာလသည် ရက်ပေါင်း ၃၆၀ စီရှိသည့် ခုနစ်,နှစ် သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်း ၂,၅၂၀ ရက်ကို ဆိုလို၏။ အကြီးစားပြည့်စုံမှုတွင် “ခုနစ်ကာလ” သည် နှစ်ပေါင်း ၂,၅၂၀ ကို ဆိုလိုသည်။ (ယေဇကျေလ ၄:၆၊ ၇) ယင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့ဖျက်ဆီးခံရသည့် ဘီစီ ၆၀၇ ခုတွင် စတင်ပြီး အေဒီ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ကောင်းကင်ဘုရင်အဖြစ် ယေရှုနန်းတင်ခံရသည့်အချိန်၌ အဆုံးတိုင်ခဲ့သည်။—လုကာ ၂၁:၂၄။
၆:၆-၁၀—ယေဟောဝါထံဆုတောင်းရာတွင် သတ်သတ်မှတ်မှတ်အနေအထားမျိုးကို မတောင်းဆိုသောကြောင့် ဒံယေလသည် ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိ လျှို့ဝှက်စွာဆုတောင်းမည်ဆိုလျှင် ပညာရှိရာမရောက်ပေလော။ ဒံယေလ၏ တစ်နေ့သုံးကြိမ်ဆုတောင်းခြင်းကိစ္စသည် အများပြည်သူသိထားသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပူးပေါင်းကြံစည်သူတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ ကြံဆတီတွင်ခဲ့ကြသည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒံယေလ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှသည် အခြားသူတို့၏အမြင်တွင် အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည့်သဘော သက်ရောက်နိုင်ပြီး ယင်းက ယေဟောဝါထံ သူ၏အကြွင်းမဲ့ဆည်းကပ်အပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြရာရောက်သည်။
၁:၃-၈။ ဒံယေလနှင့် သူ၏အဖော်သုံးဦးတို့ ယေဟောဝါထံ ဆက်၍သမာဓိစောင့်ထိန်းရန် ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းက သူတို့ရရှိခဲ့ကြသည့် မိဘလေ့ကျင့်ပေးမှု၏တန်ဖိုးကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောမိဘများသည် သူတို့၏အသက်တာတွင် ဝိညာဉ်ရေးအကျိုးစီးပွားကို ဦးစားထားပြီး မိမိတို့၏ကလေးများကိုလည်း ထိုအတိုင်းလုပ်ဆောင်ကြရန် သွန်သင်ပေးသောအခါ သူတို့၏သားသမီးများသည် ကျောင်း သို့မဟုတ် တခြားနေရာတွင်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်စုံစမ်းမှုများ၊ ဖိအားများကိုမဆို ခုခံတွန်းလှန်နိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်။
၁:၁၀-၁၂၊ ကဘ။ “မိန်းမစိုးအုပ်” သည် ရှင်ဘုရင်အား အဘယ်ကြောင့် ကြောက်ရွံ့သည်ကို ဒံယေလနားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့် ကိစ္စရပ်များကို သူ့အား အတင်းအကျပ်မလုပ်စေပါ။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ဒံယေလသည် ပို၍လိုက်လျောမည့် “အုပ်ထိန်းသူ” ထံသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ ခက်ခဲသောအခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထိုသို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ နားလည်မှု၊ ဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့် ပြုမူကျင့်ကြံသင့်သည်။
၂:၂၉၊ ၃၀။ ဒံယေလကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေဟောဝါ၏ဝိညာဉ်ရေးအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ဆည်းပူးရရှိသည့် မည်သည့်အသိပညာ၊ အရည်အချင်းများနှင့် စွမ်းရည်များအတွက်မဆို ကိုယ်တော်အား အပြည့်အဝချီးမွမ်းဂုဏ်တင်သင့်သည်။
၃:၁၆-၁၈။ အကယ်၍ ဟေဗြဲလူသုံးယောက်သည် သူတို့၏အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်၍ အစောပိုင်းကတည်းက အလျှော့ပေးလိုက်လျောခဲ့ပါက ဤသို့သောခိုင်မာသည့်ခံယူချက်ဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ဖွယ်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း “အရာရာ၌သစ္စာရှိသောသူဖြစ်” ရန် ကြိုးစားသင့်သည်။—၁ တိမောသေ ၃:၁၁။
၄:၂၄-၂၇။ ဘုရားသခင့်တရားစီရင်ချက်များပါဝင်သော ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းတရားကြွေးကြော်ခြင်းတွင် နေဗုခဒ်နေဇာအပေါ်ကျရောက်သည့်အရာနှင့် ရှင်ဘုရင် “ချမ်းသာရကောင်းရတော်မူ” ရန် ဘုရင်လုပ်သင့်သည့်အရာတို့ကို အသိပေးရာတွင် ဒံယေလတင်ပြခဲ့သည့် ထပ်တူယုံကြည်မှုနှင့် သတ္တိမျိုးလိုအပ်သည်။
၅:၃၀၊ ၃၁။ “ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်ကိုရည်ဆောင်၍ ပုံစကား” သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (ဟေရှာယ ၁၄:၃၊ ၄၊ ၁၂-၁၅) ဗာဗုလုန်မင်းဆက်တို့တွင်ရှိသည့် မာန်မာနမျိုးရှိသူ စာတန်သည်လည်း အရှက်ခွဲခြင်းခံရလိမ့်မည်။—ဒံယေလ ၄:၃၀; ၅:၂-၄၊ ၂၃။
ဒံယေလ၏စိတ်အာရုံများက အဘယ်အရာကို ဖော်ပြသနည်း
ဘီစီ ၅၅၃၊ ပထမဆုံးစိတ်အာရုံကို ဒံယေလတွေ့မြင်ရချိန်တွင် သူသည် အသက် ၇၀ ကျော်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒံယေလအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ထိ ဆက်တိုက်ပေါ်လာသည့် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်များကို ကိုယ်စားပြုသော သားရဲကြီးလေးကောင်ကို သူတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ စိတ်အာရုံမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင် ‘ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တည်ရှိသော အာဏာစက်တော်’ ရရှိသည့် “လူသားနှင့်တူသောသူတစ်ဦး” ကို သူမြင်တွေ့ရသည်။ (ဒံယေလ ၇:၁၃၊ ၁၄) နှစ်,နှစ်အကြာတွင် မေဒိ-ပေရသိ၊ ဂရိနှင့် ‘ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်သောမျက်နှာရှိသည့် ဘုရင်တစ်ပါး’ ဖြစ်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတို့ပါဝင်သော စိတ်အာရုံတစ်ခုကို ဒံယေလမြင်တွေ့ခဲ့သည်။—ဒံယေလ ၈:၂၃၊ ကဘ။
ခုနှစ်ကား ဘီစီ ၅၃၉ ဖြစ်သည်။ ဗာဗုလုန်ကျရှုံးခဲ့ပြီးနောက် မေဒိအမျိုးဒါရိမင်းသည် ခါလဒဲနိုင်ငံကို အုပ်စိုးသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒံယေလသည် မိမိနေရင်းပြည် ပြန်လည်တည်ထောင်ရန်အတွက် ယေဟောဝါထံဆုတောင်း၏။ သူဆုတောင်းနေစဉ်တွင် ဒံယေလသည် မေရှိယပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ‘ထိုးထွင်းသိမြင်နားလည်မှု’ ရှိရန် ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကို ယေဟောဝါစေလွှတ်တော်မူ၏။ (ဒံယေလ ၉:၂၀-၂၅၊ ကဘ) အချိန်ကာလမှာ ဘီစီ ၅၃၆/၅၃၅ သို့ရောက်လာပြီ။ ဣသရေလအကြွင်းအကျန်တို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်လာခဲ့ကြပြီ။ သို့သော် ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်မှုရှိသည်။ ယင်းသည် ဒံယေလ စိုးရိမ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်လာသည်။ ယင်းအကြောင်းကို ဆုတောင်းသုံးသပ်ပြီး ယေဟောဝါသည် ဒံယေလထံသို့ ရာထူးအဆင့်မြင့်သည့်ကောင်းကင်တမန်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်။ ဒံယေလကို အားပေးစကားပြောပြီးနောက် ကောင်းကင်တမန်သည် မြောက်ဘုရင်နှင့် တောင်ဘုရင်တို့စပ်ကြား အကြီးအကျယ်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်ကို ပြောပြသည်။ ဘုရင်နှစ်ပါးတို့စပ်ကြား ဆိုင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုသည် မဟာအလက်ဇန္ဒား၏နိုင်ငံ သူ၏ဗိုလ်ချုပ်လေးဦးတို့လက်တွင် ကွဲပြားသွားသည့်အချိန်မှစ၍ အရှင်မင်းကြီးမိက္ခေလ “ပေါ်လာ” မည့်အချိန်အထိ ဖြစ်သည်။—ဒံယေလ ၁၂:၁။
၈:၉—“သာယာသောပြည် [“ရတနာပြည်၊” ကဘ]” သည် အဘယ်အရာကို ပုံတင်ပြသနည်း။ ဤကိစ္စတွင် “ရတနာပြည်” သည် အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်တည်ရှိချိန်အတွင်း ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များ၏ မြေကြီးဆိုင်ရာအခြေအနေကို ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
၈:၂၅—“သခင်တို့၏သခင် [“မင်းတကာ့မင်း၊” ကဘ]” ကား မည်သူနည်း။ “မင်း” ဟူ၍ပြန်ဆိုသော ဟေဗြဲစကားလုံး ဆာရ် (sar) သည် အထူးသဖြင့် “အကြီးအမှူး” သို့မဟုတ် “ဦးသျှောင်” ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ “မင်းတကာ့မင်း” ဟူသောဘွဲ့အမည်သည် “အမြတ်ဆုံးသောမင်းစုထဲက မိက္ခေလ” အပါအဝင် ကောင်းကင်တမန်အားလုံးတို့၏အကြီးအမှူးဖြစ်သူ ယေဟောဝါဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းအတွက်သာ အသုံးပြုသည်။—ဒံယေလ ၁၀:၁၃။
၉:၂၁၊ ကဘ—ဒံယေလသည် ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလအား “လူ” အဖြစ် အဘယ်ကြောင့် ရည်ညွှန်းဖော်ပြသနည်း။ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အစောပိုင်းကမြင်ခဲ့သော စိတ်အာရုံတစ်ခုတွင် ဒံယေလထံ လူကဲ့သို့သောသဏ္ဌာန်ဖြင့် ထင်ရှားပြခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အတိုင်း ဂါဗြေလသည် ထိုသဏ္ဌာန်ဖြင့် ဒံယေလထံသို့ လာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။—ဒံယေလ ၈:၁၅-၁၇။
၉:၂၇—‘လူအများတို့နှင့်ဖွဲ့သော’ အဘယ်ပဋိညာဉ်သည် သီတင်းနှစ်များ၏ ၇၀ ခုမြောက်သီတင်းနှစ်ကုန်ပိုင်း သို့မဟုတ် အေဒီ ၃၆ အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသနည်း။ ပညတ်ပဋိညာဉ်သည် ယေရှုနှက်တိုင်တင်ခံရချိန်ဖြစ်သော အေဒီ ၃၃ တွင် ဖယ်ရှားခံရပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဇာတိဣသရေလလူမျိုးများနှင့်ဖွဲ့သော အာဗြဟံ၏ပဋိညာဉ်ကို အေဒီ ၃၆ အထိ ဆက်၍တည်ရှိစေခြင်းအားဖြင့် ယေဟောဝါသည် ဂျူးလူမျိုးတို့အား အာဗြဟံမှဆင်းသက်လာသူများဖြစ်သည်ကိုထောက်သောကြောင့် အထူးမျက်နှာသာပေးတော်မူသည့်အချိန်ကို တိုးချဲ့တော်မူခဲ့သည်။ အာဗြဟံ၏ပဋိညာဉ်သည် “ဘုရားသခင်၏ဣသရေလအမျိုး” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်တည်ရှိသည်။—ဂလာတိ ၃:၇-၉၊ ၁၄-၁၈၊ ၂၉; ၆:၁၆။
၉:၁-၂၃; ၁၀:၁၁။ ဒံယေလ၏နှိမ့်ချမှုရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်ဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်း၊ ကျမ်းစာကို ကြိုးစားလေ့လာခြင်းနှင့် စွဲမြဲစွာဆုတောင်းခြင်းတို့ကြောင့် သူ့အား “အလွန်ချစ်အပ်သောသူ” ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဤသဘောစရိုက်များကပင် သူ၏အသက်တာကုန်ဆုံးချိန်အထိ ဘုရားသခင်အပေါ် ဆက်၍တည်ကြည်ရန် သူ့အား ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒံယေလ၏ပုံသက်သေကို လိုက်လျှောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ကြစို့။
၉:၁၇-၁၉။ “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတည်နေရာ” ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာသစ်ရောက်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအခါ၌ပင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်၏ ဆင်းရဲခက်ခဲမှုများ အဆုံးတိုင်စေလိုခြင်းသည် ယေဟောဝါ၏နာမတော် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ရေးနှင့် ကိုယ်တော်၏အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးမှုကို သံသယကင်းရှင်းစေရေးတို့ထက် ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာ မဖြစ်သင့်ချေ။—၂ ပေတရု ၃:၁၃။
၁၀:၉-၁၁၊ ၁၈၊ ၁၉။ ဒံယေလထံရောက်လာသော ကောင်းကင်တမန်ကို တုပရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကူအညီပေးခြင်း၊ စိတ်ကိုသက်သာရာရစေသောစကားများ ပြောခြင်းဖြင့် အချင်းချင်းအားပေးတိုက်တွန်းသင့်သည်။
၁၂:၃။ နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင် “ပညာရှိသောသူတို့ [“ထိုးထွင်းသိမြင်ဉာဏ်ရှိသောသူတို့၊” ကဘ]” ဖြစ်သော ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များသည် ‘အလင်းဆောင်သူများအနေနှင့် ထွန်းလင်း’ ကြပြီး “အခြားသိုး” ထဲမှ “လူအုပ်ကြီး” အပါအဝင် “လူအများတို့ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲသို့” သွင်းခဲ့ကြသည်။ (ဖိလိပ္ပိ ၂:၁၆; ဗျာ. ၇:၉၊ ကဘ; ယောဟန် ၁၀:၁၆) ဝိညာဉ်တော်ဖွားများသည် ခရစ်တော်၏အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နာခံမှုရှိသောလူသားများအတွက် ရွေးနုတ်ဖိုးအကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝအသုံးချခြင်းတွင် ကိုယ်တော်နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သောအခါ အပြည့်ဝဆုံးသောသဘောဖြင့် ‘ကြယ်များကဲ့သို့ထွန်းလင်းကြ’ လိမ့်မည်။ “အခြားသိုး” သည် အဘက်ဘက်တွင် ဝိညာဉ်တော်ဖွားများကို နှလုံးအပြည့်ထောက်မခြင်းဖြင့် သူတို့နှင့်အတူ တည်ကြည်စွာပူးပေါင်းသင့်သည်။
ယေဟောဝါသည် ‘ကိုယ်တော်အား ကြောက်ရွံ့သောသူတို့ကို ကောင်းချီးပေး’
ဒံယေလကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ်အရာ သွန်သင်ပေးသနည်း။ ထိုကျမ်းတွင်ပါသည့် ပြည့်စုံခဲ့ပြီးသော၊ ပြည့်စုံရန်ရှိသေးသောပရောဖက်ပြုချက်များကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ယေဟောဝါသည် မိမိ၏စကားတော် ပြည့်စုံစေတော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်ကို ထိုပရောဖက်ပြုချက်များက ထိထိမိမိဖော်ကျူးပါသည်တကား!—ဟေရှာယ ၅၅:၁၁။
ဒံယေလ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းပါသော ကျမ်းမှတ်တမ်းအပိုင်းက ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ်အရာကို တင်ပြသနည်း။ ဗာဗုလုန်နန်းတွင်းဘဝကို ခံယူရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသော ဟေဗြဲလူငယ်လေးယောက်တို့သည် “ထိုးထွင်း၍နားလည်နိုင်သောဉာဏ်သတ္တိ” ရရှိခဲ့ကြသည်။ (ဒံယေလ ၁:၁၇) စစ်မှန်သောဘုရားသခင်သည် မိမိကောင်းကင်တမန်ကို စေလွှတ်ပြီး မီးဖိုထဲမှ ရှာဒရက်၊ မေရှက်နှင့် အဗေဒနေဂေါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ဒံယေလသည် ခြင်္သေ့တွင်းထဲမှ ကယ်နုတ်ခံရခဲ့သည်။ ယေဟောဝါသည် ‘ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ကိုးစားသူတို့ကို မစ၍ ကာကွယ်တော်မူ’ ပြီး ‘ကိုယ်တော်အား ကြောက်ရွံ့သောသူတို့ကို ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။’—ဆာလံ ၁၁၅:၉၊ ၁၃၊ ကဘ။
^ အပိုဒ်၊2ဒံယေလကျမ်း အခန်းငယ်တစ်ခုချင်းစီ သုံးသပ်ထားချက်ကို ယေဟောဝါသက်သေများထုတ်ဝေသော ဒံယေလပရောဖက်ပြုချက်ကို ဂရုပြုလော့! စာအုပ်ကိုရှု။
ဒံယေလသည်အဘယ်ကြောင့် “အလွန်ချစ်အပ်သောသူ” ဖြစ်ရသနည်း
က၀၇ ၉/၁ စာ. ၁၇-၂၀
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇
စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇